We She Me: မြေးနဲ့အဘွား ဆော့ကစား
အဘွားနဲ့ မြေး ဆော့ကစားတာတွေ ရိုက်ထားတဲ့ Video လေးတွေကို ပေါင်းထားတာပါ။ ၂ မိနစ်ကျော်ကျော်စာလောက်ပါပဲ။
| FLAGS: Baby , Mom (She)
Anonymous - 8/4/07, 11:33 AM
ကိုအန်ဒီရေ.. သမီးလေးက ချစ်စရာလေးပဲ ။ သိပ်မငိုဘူးထင်တယ် ။ ကလေးဆိုတာလည်း သူ့ ဥာဉ်နဲ့သူ လာတယ်လို့ မေမေက ပြောဖူးတယ် ။ တချို့ကလေးက သိပ်မငိုဘူးပေါ့ ။ တချို့ကတော့ တချိန်လုံး ငိုနေရမှ ကျေနပ်တာမျိုး ။
ပြုံးနေတာလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ။ ကလေးအငှားလာချီလို့ ရမလားဟင် အဟီ ။
ko tian - 8/4/07, 12:04 PM
Well, it touches my heart. My grandma is 93 years old and she lives in Yangon. I wish I could see her now.
Your daughter is so cute. What is she talking? I am happy to listen such kind of talking. You can imagine as you like, for instance, I love Mom, I love Dad, I love grandee,,, How nice.. Hmmm..
Andy Myint - 8/4/07, 2:57 PM
We just interpret her babbling whatever we want .. like .. “Dont want to sleep”.. when she voices “ape phoo” especially when we are trying to asleep her. Or “Mummm” to Mom.. when she voices... Your grandma lives long and it’s nice to have such one....
Andy Myint - 8/4/07, 3:00 PM
လေကြောင့် ဗိုက်နာတဲ့ အချိန်နဲ့ အရမ်းကို အိပ်ချင်နေပြီး အိပ်လို့မရတဲ့ အချိန်တွေက လွဲရင် သိပ်မငိုပါဘူး.... သူက အခုဆော့တတ် ရယ်တတ်လာပြီလေ.. သူ.. ဟတ်ဟတ်...ဟတ်ဟတ် ရယ်ရင် အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလို အသိတွေက ချီလိုက်၊ အိမ်နီးနားချင်းတွေက လာချီလိုက် ခေါ်သွားလိုက်ဆို ကောင်းမှာပဲ... လာချီလေ။
Myo Kyaw Htun - 8/5/07, 2:03 AM
အဘွားရဲ့ အသည်းပဲ နေမှာ။ ;)
p.s: @မဂျစ် ... ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါ :P
sin dan lar - 10/22/08, 5:50 PM
ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးမှ ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေမိတာ သတိထားမိတယ်..